🥇 ▷ Qaar ka mid ah astaamaha Redmi Note 8 ayaa ka xanaajiyey shirkadda & # 039; s Maamulaha guud ✅
Qaar ka mid ah astaamaha Redmi Note 8 ayaa ka xanaajiyey shirkadda & # 039; s Maamulaha guud
Redmi Note 7 ayaa lagu taxay dad badan sida casriga dhexe ee leh qiimaha ugu fiican suuqa, tan iyo markii la bilaabay bishii Janaayo ee sanadkan. Tani waxay la timid iyada oo loo yaqaan ‘Snapdragon 660’ oo ah soosaariyaha SoC, kaas oo guul weyn u ahaa ilaa iyo hadda, in kasta oo processor-kaan uu durba leeyahay ku dhawaad ​​seddex sano oo ansax ah suuqa, haddana waxaa lagu gartaa inuu yahay mid bixiya waxqabad wanaagsan iyo furfurnaan ku dhawaad ​​barnaamij kasta iyo ciyaar aan laheyn aragti xun.
Si kastaba ha noqotee, xukunkiisii ​​mid ka mid ah mobiladaha ugu wanaagsan ee sanadkaan, waxay umuuqataa, inuu ku mashquulsan yahay kii uu ka horeeyey, kaasoo ah mid aan ahayn tan Redmi note 8. Qalabkaani waa waxa aan diiradda saareyno fursadan cusub, sidii uu ahaa Lu Weibing, maamulaha shirkadda Redmi, oo soo saaray tilmaamo ku saabsan.
Mas’uulka sare ee la magacaabay ayaa socod ku maray Weibo, oo ah shabakadda bulshada ee Shiinaha ee microblogging, si uu u xuso arrintaas “Mashiin cusub ayaa gacanta ku jira”, oo tilmaamaysa in isaga ama shirkadda ay tijaabinayaan… iyo “mashiin”, waxay si cad u tilmaamaysaa taleefanka casriga ah.
Redmi note 8 ayaa ka dhawaajiyay Weibo
Weibing ayaa lagu sheegay boostada inay soo baxday in aaladdaan dahsoon – oo aan sidaa u sir ahayn, oo aan dhihi doonno sababta- qaado sawirro aad u fiican oo faahfaahsan iyo caddeyn leh isla markaana leh madax-bannaani runtii wanaagsan, iyo sidoo kale soo saarida saamiga shaashadda ee jirka ka weyn kaas oo bixiya dareen aad u deggan. Dambe wuxuu inoo sheegayaa in dhuumaaleyda xuduudahu ay aad u yar yihiin.
Isbarbardhiga u dhexeeya Oukitel Y4800 iyo Redmi Note 7
Hadda, si loo caddeeyo ereyga ‘Redmi Note 8’, Weibo wuxuu ku dhawaaqay in boostada la daabacay isagoo adeegsanaya “Note8Android”, kaas oo la jaanqaadaya magaca moobaylka ee aan hadda siino booskaaga. Sidaa darteed, waxaan rajeyneynaa in, marka baaritaanada lagu sameeyo midkan la dhammeeyo, in la bilaabi doono dhowaan, laga yaabee dhowr bilood gudahood.